ILake Michigan Retreat
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBrook
Amanyathelo ukusuka elunxwemeni lwabucala olunesanti kwiLake Michigan kunye ne-155 yeenyawo zolwandle ngaphambili. Ikhaya elihle elisandula ukuhonjiswa ngokutsha kunye nolwandle oluhle eLake Michigan! Iphelele kwiholide yosapho lwakho. ILake Michigan laziwa ngokutshona kwelanga okumangalisayo!
Ihleli kulwandle lwayo olunesanti, kwindawo yokugcina indalo, eli khaya lisanda kulungiswa eLake Michigan linika iimbono ezintle kunye nokutshona kwelanga okuhle. I-master bedroom suite inomfanekiso ogqibeleleyo weLake Michigan onokuthi uyijonge kwibhedi yakho yaseCalifornia King okanye uphumele ngaphandle kwidesika ebanzi ngelixa usonwabela ikofu yakho yasekuseni. Kukho amanye amagumbi amabini okulala kwinqanaba eliphambili, omabini aneebhedi zaseCalifornia King. Umgangatho ongezantsi unegumbi lokuhlala elineseti ezimbini zeebhedi ezingamawele. Ikhaya linokukhanya kwendalo okuninzi, imiqadi emihle yesilingi eqatywe mhlophe, kunye nemvakalelo evuleleke kakhulu. Ikhitshi inazo zonke izixhobo zentsimbi engatyiwayo kwaye igumbi lokutyela lihlala abantu abali-10, elilungele ezo zidlo zosapho. Kukho nebar yewayini kunye nesonka samasi. Konke oku, kwaye kuphela ukukhwela ibhayisekile ngokukhawuleza ukuya edolophini Charlevoix okanye idrayivu emfutshane ukuya Boyne Mountain.
** Nceda uqaphele le ndawo irenta ngobusuku obu-7 (ngeCawa ukuya ngeCawa) ngexesha lexesha eliphakamileyo kunye nobusuku obu-3 ubuncinci kwixesha lokuphumla. Asikwazi ukubonelela ngokufika kwangoko okanye ukuphuma kade ngexesha leenyanga zasehlotyeni kule ndawo.
Eli khaya likwilokishi engqongqo ngokuhlala ixesha elifutshane kunye nezithintelo zokusetyenziswa. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ubuze ngaphambi kokuba ubhukishe
Ezinye izinto ezingaphandle zinokusebenza ngoko nceda usitsalele umnxeba ngokuthe ngqo ku-231.459.4257 ngolwazi olungakumbi.
Umbuki zindwendwe ngu- Brook
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Charlevoix